Fitaovana fitsaboana tsy misy poizina tsara indrindra ho an'ireo fitaovana fitsaboana sy fantsom-pamokarana mangarahara | Aimsea
Fitaovana fitsaboana tsy misy poizina
Calcium Zinc (CaZn) tsy misy poizina Stabilizers PVC ampiasaina amin'ny vokatra sy fitaovana fitsaboana an-jatony miaraka amina fampiharana bebe kokoa hatrany novolavolaina. Vita amin'ny PVC dia azo havaozina amin'ny mangarahara tsara mba hahafahana manara-maso tsy tapaka ny fikorianan'ny tsiranoka. Tsy ny PVC ihany no manome ny fahafaha-manao ho an'ny fampiharana fa ny hery, ny fenitra ara-pahasalamana, ny faharetana ary na dia eo ambanin'ny maripana sy ny fepetra aza. Etsy ankilany, ny stabilizers PVC dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fiakaran'ny vidim-pitsaboana miakatra.
Stabiliser tsy misy poizina, tsy misy metaly mavesatra manimba, manolo ny stabilizer nentim-paharazana, fiarovana sy fidiovana, tsara ho fiarovana ny tontolo iainana
Fandokoana voalohany tsara sy fitoniana maharitra maharitra;
Na ny fanamafisana sy ny fampiroboroboana ny fihenan'ny plastika dia tsara, tsy misy takelaka;
Manana fitoniana sy hafanana tsara dia tsara izy io, misy fiantraikany amin'ny fanamafisana ny hazavana, fanoherana ny toetr'andro tena tsara, afaka mampihena ny fatran'ny diôdiôdiôma titanium; mahatohitra ny fandotoana sulfide, afaka manatsara ny vokatra ivelany fampiasana ny vokatra;
Ny fanaparitahana, ny fanoherana ny fahasimbana, ny fanatsarana ny lokony sy ny hamafin'ny vokatra ary ny fanatsarana ny endrik'ilay vokatra;
Izy io dia manana fiasa mifangaro tsy manam-paharoa, izay manome ny fanaparitahana tsara amin'ny mpameno, manatsara ny fonosana amin'ny resina, manatsara ny fahombiazan'ny vokatra, mampihena ny fitafy mekanika ary manalava ny androm-piainan'ny fitaovana;
Izy io dia afaka manatsara ny tanjaka miempo, mampiroborobo ny fisolohana, ary manao ny sela ho mitovy sy milamina. Ny haavon'ny vokatra dia fisaka, ny loko milamina, ny fihenan'ny loko dia kely ary ny vidin'ny famokarana azo ahena.
Mety amin'ny vokatra vita amin'ny tontolo iainana malefaka PVC, toy ny ravina calendering, hoditra artifisialy ary sns, Amin'ny alàlan'ny fitsapana SGS, mihaona amin'ny RoHS ， EN71 ， EN1122 ， EPA 3050B, FDA 21CFR .172 888 fenitra andiany.
Votoatin'ny lavenona ambany
Tsy misy fofona, Tsy misy phenol
Tsy misy poizina, tsy misy fofona ary sariaka amin'ny tontolo iainana
Tsy misy atomisation & tsy misy plate plate
Votoatiny ambany amin'ny fananana mora azo oxydizable
Mety amin'ny vokatra mihosin-tany mihosin-tany eo amin'ny tontolo iainana foam toy ny wallboard sy ny lambam-baravarankely ary ny varavarankely misy jamba .Ny fitsapana SGS dia mihaona amin'ny RoHS, EN71 ， EN1122 ， EPA 3050B, FDA 21CFR .172 888 andian-tsarimihetsika manerantany.
1. Rindranasa naroso
Impact Modifier Foamin g agents ACR Mpandrindra foaming
Kalsioma karbonat e
Lubrican ts mpanome loko
levitra 100 4-6
0.5-1.5 0.5-2 6-12 20-80 1-2 mety
A-> angon-drakitra fampifangaroana ：
Hafanana hafanana ： 100-110 ℃ mari-pana mangatsiaka ： 40-50 ℃
B-> Fomba fampidirana:
Sokiro Varingarin'i1 ara-potoana Sokiro Varingarin'i2 ara-potoana Sokiro Varingarin'i3 ara-potoana Sokiro Varingarin'i4 ara-potoana Votoatin'ny confluent Loha bobongolo Bobongolo vava
Ny PVC dia be mpampiasa amin'ny fampiharana ara-pitsaboana ankehitriny satria tsy zakan'ny mikraoba izy io, diovina mora foana ary manome rindranasa tokana ampiasaina hampihenana ny aretina amin'ny fitsaboana.
Ny PVC dia nampiasaina teo amin'ny sehatry ny fitsaboana nandritra ny 50 taona mahery. Namboarina voalohany izy io mba hanaovana fantsona malefaka sy kaontenera hisolo ny fingotra sy vera izay efa nampiasaina ho an'ny fampiharana amin'ny fitsaboana. Ny PVC dia azo ampiarahina miaraka amin'ny fantsom-pandrefesana avo lenta ka mamela karazana kaontenera maro karazana sy karazana fifamatorana marobe. Ny PVC misy ara-barotra dia be branched ary ambany crystallinity. Ireo kaontenera vita amin'ity karazana PVC ity dia manana tanjaka tsara kokoa, toetra ambony ary tanjaky ny tany tsara kokoa.
Ny PVC ihany koa dia manolotra ny fahafaha-manao ilaina amin'ny fampiharana toy ny kitapo rà sy kaontenera IV, saingy azo ianteherana ihany koa noho ny tanjaka sy ny faharetany, na dia eo ambanin'ny mari-pana sy ny toetr'andro aza. Azo esorina mora foana koa ny PVC mba hanaovana fantsom-boaloboka IV, ampidirina amin'ny thermoform mba hanaovana fonosana 'blister' na hametahana bobongolo hanaovana kaontenera henjana. Io fahaizan-javatra io no antony lehibe mahatonga ny PVC ho fampiasa amin'ny mpamorona vokatra ara-pitsaboana.
Previous: Polyvinyl Chloride Stabilizer ho an'ny kiraro & soloina soloina vita amin'ny solika vita amin'ny PVC
Manaraka: Plastika tsara ho an'ny stabilisiteran'ny PVC ho an'ny solomaso fiarovana ny fanapahana ahitra
Pvc Heat Stabilizers ho an'ny kilasy fitsaboana
Pvc One Pack Stabilizer, Pvc Additives, Pvc Heat Stabilizer, Pvc Stabilizer, Stabilizer tsy misy poizina Pvc, Pvc Heat Stabilizer ho an'ny Flexbile,